Mamono ahy (Blog) malefaka | Martech Zone
Alarobia 1, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
mpitsidika: Nidina 33%
Fijery pejy: Nidina 18%
Famandrihana RSS: Miakatra 5%
AdSense: Nidina 70%
Laharana Technorati: Nidina 4%.
Ireto ny sasany amin'ireo antontan'isa nataoko tato anatin'ny roa herinandro tao amin'ny bilaogiko! Ho an'ireo mpitsidika mahazatra ahy, ho hitanao fa tsy nanao bilaogy tsy tapaka aho - iray amin'ireo fitsipika lehibe indrindra tokony tsy hotapahinao. Miresaka momba izany ny fanaovana bilaogy vahana. Raha vantany vao very ny tanjaky ny tenanao ianao dia tsy misy fomba haingana hiverenana.
Nahamarika aho fa misy bilaogera manao asa mahafinaritra amin'ny famenoana ny toerana maty amin'ny:
Famerenana ireo bilaogy malaza indrindra.
Manana bilaogera vahiny.
Misintona horonantsary multimedia (video na feo) izay misy lohahevitra ary azo alaina avy amin'ny Youtube ary fantsona hafa.
Ny paikady hany noraisiko dia ny manohy mandefa Del.icio.us rohy. Nijanona tamin'ny fanoratana aho tamin'ny ankapobeny, nieritreritra ny hanoratra ary nijanona tsy handray anjara amin'ny resaka bilaogy hafa. Ny iray amin'ireo antony tsy nametrahako fomba hafa hitahirizana ny mpamaky dia izaho nanao te hahita izay hitranga.
Manana an RSS ny fahana dia toa fomba iray famoahana izay hitazonana (ary hampiakatra mihitsy aza) ny mpanjifa. Tsy dia miabo aho, fa vonona ny hanao filokana hoe mpitsidika no tonga teto tamin'ny alàlan'ny motera fikarohana, nahatsikaritra ny isan'ny mpanjifa azoko, ary nihevitra izy ireo fa mendrika handray anjara Ny rohy isan'andro avy amin'ny Del.icio.us dia farafaharatsiny manome lanja kely an'ireo mpanjifa vaovao ireo.
Raha mpanjifa vaovao ianao dia manantena zavatra bebe kokoa avy amiko! Teo afovoan'ny fiovan'ny asa aho ary nanolotra rindran-tsarintany ho an'ny mpanjifa. Lazaina marina, manana labiera na roa isaky ny hariva aho amin'ity herinandro ity miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko avy amin'ny mpampiasa ahy ankehitriny. Orinasa Inc 500 mivoatra haingana izy ireo ary tsy tiako hieritreritra ny mpiasa handao ny orinasa noho ny antony ratsy… Mifindra amin'ny fanamby vaovao sy fotoana mahafinaritra aho.
Ny alatsinainy no andro voalohany hiarahako amin'ny mpampiasa vaovao ahy ary antenaiko izany. Amin'ny faran'ny herinandro ho avy dia tokony hilamina ny raharaha ary hiverina hiasa aho. Amin'ity asa ity dia hanana firoboroboana amin'ireo orinasam-pampandrosoana any ivelany aho, indostria an-tserasera vaovao (marketing sy patronage an'ny trano fisakafoanana), teknolojia vaovao (fampidirana Point of Sale) ary e-varotra. Miomàna amin'ny votoaty mahafinaritra sasany rehefa milentika aho!
Martech Zone ho avy ny fitsanganana amin'ny maty!
Aug 1, 2007 amin'ny 8: 23 AM
Doug - Mahafinaritra ny bilaoginao. Ankafizo ny fahavaratra sy ny fotoana vaovao rehetra mety amin'ny asanao.
Aug 1, 2007 amin'ny 10: 19 AM
Te hampahafantatra anao fotsiny izany
Mbola mamaky aho. Vao tsy ela akory izay
tanàna amin'ny volana Jolay be dia be amin'ny Vacation.
Na izany aza, nanao andriamby fiara niaraka tamin'ny
ny tranonkalako. Mitadiava sary ao amin'ny bilaogiko.
Faly be ianao mahita ny momba anao
Nanatevin-daharana Technorati taorian'ny famakiana momba
ianao ao amin'ny tranokalan'izy ireo.
Ankehitriny dia mila Fav bebe kokoa aho.
Manana torohevitra ho ahy ve ianao?
Mirary soa anao hahita asa vaovao.
Aug 1, 2007 amin'ny 11: 17 AM
Ataoko fa tsy taitra aho. Tsy dia manam-potoana ampy hanaovana scan RSS aho raha tsy hoe mitsidika tranokala tsirairay. (Omeo ahy ny raharaha iray manontolo!) Ny vao mainka hiharatsy izany, raha tsy manome tolotra feno ny bilaogera iray amin'ny ankapobeny dia tsy afaka mamaky ilay blurb aho ary _ avy eo dia mila mankany amin'ilay tranokala hamita ny tolotra. (Miala tsiny, omeo tsiny indray aho, fa ahy daholo izany.)
1 Aogositra 2007 amin'ny 1:32 PM
Ny fialan-tsasatra dia tsara ary mirary soa amin'ny fiasan'ny asa.
Aza manahy momba ny isa. Ny bilaogiko manokana dia misy nomerao fifamoivoizana tsy miovaova, fahitana pejy ary mpamaky RSS. Mahazo ny fiakarana tsindraindray avy amin'ny StumbleUpon aho fa izany no izy. Fa tsy manam-potoana hanaovana bilaogy in-droa isan-kerinandro fotsiny aho, ka tsy antenaiko hitombo haingana ny mpamaky ahy.
Hanandrana paikady vaovao hameno mpamadika vaovao aho atsy ho atsy mba hitondra ahy hatramin'ny lahatsoratra 3 isan-kerinandro. Ho hitako ny fandehany.
Aug 2, 2007 amin'ny 7: 23 AM
Ho avy ny fitsanganana amin'ny blaogy Teknolojia Marketing!
Ary ho eto aminao aho rehefa tonga izany.
Aug 2, 2007 amin'ny 9: 06 AM
Ankafizo ny lahatsoratra - mirary soa amin'ny fanovana asa! Izy io dia mamerina ny eritreritrao momba ny momentum, araka ny nambaranao tsara. Misy mahalala ny adiny 2 fanampiny amin'ny widget androany ?! 😉
8 Aogositra 2007 amin'ny 5:50 PM
Efa naheno momba Quantcast ve ianao, serivisy izay mahazo ny antontan'isa malaza manerana ny fantsom-baovao. Tsy mikarakara ratsy mihitsy ianao, miaraka amin'ny ampahatelon'ny mahazatra, ary mpitsidika 1 amin'ny 50 no sokajiana ho “mpidoroka”:
8 Aogositra 2007 amin'ny 7:15 PM
Nanana an-tsoratra ny pejin-pejin'izy ireo nandritra ny fotoana elaela aho. Misaotra anao nametraka ity lahatsoratra ity, na izany aza! Tsy nandeha aho ary nanamarina ireo statistika.
Tena feno fankasitrahana aho noho ireo namana, toa anao, izay miverina hatrany ary miditra amin'ny resaka. Amin'ny lafiny maro, mpandinika aho… manamarina ny resaka nifanaovan'ny olon-kafa.